कर्णालीमा नेतृत्व लिन नेकपा नेताबीच काठमाडौंमा दौडधुप
दिपेन्द्र शर्मा/सुर्खेत, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा कर्णाली प्रदेश तथा जिल्लाको नेतृत्वका लागि स्थानीय नेताहरूले दौडधुप सुरू छ । उनीहरू जिल्लाको नेतृत्व लिन काठमाडौंमा केन्द्रीय नेताहरूसँग लविङ गरिरहेका छन् । तीन महिना अघि तत्कालीन नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच पार्टी
नेवि संघ खोटाङ–काठमाडौं सम्पर्क समितिको संयोजकमा रोजन राई
काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघ खोटाङ–काठमाडौं सम्पर्क समितिको संयोजकमा रोजन राई चयन भएका छन् । २ महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीका साथ समितिका पूर्व सभापति समेत रहेका राईलाई संयोजक तोकिएको हो । संयोजक चयनका लागि शनिबार नेपाल कमर्स क्याम्पसमा आयोजित भेलामा विवाद बढेपछि राईलाई अधिवेशन
नेकपामा एक व्यक्ति एक पद
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले सरकार वा पार्टी मध्ये कुनै एक पदमा मात्र बस्न पाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार पार्टी कार्यालय धुम्वाराइमा बसेको वैठकले पार्टीको उच्च जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरुलाई पार्टीको कार्यकारी पद नदिने निर्णय पनि गरेको हो । वैठकले नेकपाको केन्द्रीय
अधिकारविहीन उप–प्रमुख अर्थहीनःउपप्रमुख खड्गी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उप–प्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले देशभरका उपमेयरलाई संविधान प्रदत्त अधिकार नदिईएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएकी छिन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख खड्गीले भनिन्,‘मलाई मात्रै होईन, देशैभरका उपप्रमुखलाई अधिकारविहीन
मन्त्रीसहित माधव नेपाल बौद्ध–जोरपाटी सडकमा, १५ दिनमा खाल्डा नपुरे कारवाही
काठमाडौं । बल्ल अहिले आएर बौद्ध–जोरपाटी सडकको दुरावस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । बिहीबार पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालसहित भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले निरिक्षण गरेपछि सडक पिच हुने आश स्थानीयले गरेका छन् । स्थानीय दावा शेर्पा भन्छन्‘अति भएको थियो
२९ गते नेपाल बन्द गर्ने विप्लवको चेतावनी
काठमाडौं । विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले पार्टी प्रवक्ता पूर्व मन्त्री खड्ग विश्वकर्मा प्रकाण्ड पक्राउ परेपछि सरकारको बिरोध गरेको छ । मंगलबार बेलुकी पार्टी प्रवक्ता पक्राउ परेपछि विप्लव नेतृत्वको माओवादी राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइ पूरा गर्ने अभियानमा अवरोध सिर्जना नगर्न सरकारलाई चेतावनी
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बस्दैछ । समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । संसदमा पार्टीको भूमिका र प्रधानन्यायाधीशमा दिपकराज जोशी अस्वीकृत भएपछि
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ : भीमसेनदास प्रधान
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्य भीमसेनदास प्रधानले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् । आईतबार एक साक्षात्कार कार्यक्रममा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस बैतडीका संस्थापक सभापति एवं पूर्व सांसद कृष्णकुमार जोशीको निधन भएको छ। पञ्चायत सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा शसक्त भूमिका निर्वाह गरेका जोशी कृष्णप्रसाद भट्टराईका अनुयायी थिए । बैतडीको मेलौली नगरपालिका सलेना घर भएका जोशीको ७३ वर्षको उमेरमा मंगलबार काठमाडौंमा निधन भएको
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल र भारतबीचको सहकार्यका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका लागि दुईपक्षीय संयन्त्र सक्रिय हुन थालेको बताएका छन् । कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि एसियाली प्रतिष्ठान तथा नेहरु स्मृति संग्रहालय र पुस्तकालयले आयोजना
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले मंगलबार (आज) काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । सरकार सर्वसत्तावादको बाटोमा अघि बढेको भन्दै कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको हो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा, अधिनायकवादको विरोध र महँगी नियन्त्रणका
काठमाडौं । राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले तीनै तहको सरकारले कर बढाएर जनताको ढाड सेकेको बताएका छन् । ‘सरकार समृद्धिका नाममा जनतालाई कर थुपार्दै गएको छ, त्यसैले ओली सरकारको समृद्धि भनेकै कर अभिवृद्धि हो,’ उनले भने । सोमबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै
पूर्व प्रधामन्त्री खनालको उपचार चीनमा
काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता झलनाथ खनाल अस्वस्थ भएका छन्। नेता खनालको चीन सिचुवानस्थित इन्टरनेसनल हस्पिटल अफ सिचुवानमा उपचार भइरहेको छ। उनको प्यारा थाइराइड र मिर्गौलामा पत्थरीको शल्यक्रिया गरिएको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले खनालको उपचारमा सहयोग पुर्‍याइरहेको बताइएको
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका परिभाषामा अरु पार्टी सरकारमा हुँदा अधिनायकवाद देख्ने ऐतिहासिक परम्परा नै रहेको जिकिर गरेका छन् । नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको ४०औँ स्मृति दिवसका अवसरमा नेकपा सचिवालयले सोमबार आयोजना गरेको
कानूनमन्त्रीलाई कारबाही नगरे आन्दोलन गर्ने कांग्रेसका महिला सांसदको चेतावनी
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महिला सांसद तथा नेतृहरूले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई कडा भन्दा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डीला संग्रौलाले नारीको अस्मिता
कांग्रेसले गोविन्द केसीको हत्या चाहेको हो ? प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका शक्तिले डा. गोविन्द केसीको हत्या गर्न र लाशको राजनीति त गर्न चाहेको हैन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। पुष्पलालको ४० औँ स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘गोविन्द केसीले नेपालमा पहिलो
काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिका र वडा कार्यालयका कर्मचारीको मनोमानीले सेवा प्रभावित भएको आरोप स्थानीयवासीले लगाएका छन् । गोकर्णेश्वर नगरबासीको आयोजनामा शनिबार जय नेपाल संचार गृह जोरपाटीमा ‘सुशासन आजको आवश्यकता’ भन्ने नाराको साथमा ‘स्थानीय निर्वाचन पश्चात पनि कर्मचारीकै मनोमानी’ बिषयक छलफलका
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार मुलुकमा‘एक दलीय’व्यवस्था लाद्न खोजिरहेको आरोप लगाएको छ । ३६औं बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली सरकार एक दलीय व्यवस्था लागू गरेर जनताका अधिकार खोस्न उत्पेरित
कांग्रेसको अवरोधका कारण आधा घण्टाका लागि संसद वैठक स्थगित
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेपछि आधा घण्टाका लागि संसद्को स्थगन भएको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पुरानै स्वरुपमा ल्याउन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरेको हो । आज शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेस
सेवाबाट हटाएका दिगम्बर झा र मिश्रको पुनर्वाहली,सरकारलाई सर्वोच्चको झड्का
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका राजनीतिक नियुक्ती खारेज गरेको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई झड्का लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले समायावधि हुँदै हटाउन नमिल्ने आदेश दिएपछि सरकारको निर्णय उल्टिएको छ । प्रक्रिया र कार्यविधि पुरा गरेर नियुक्त भएकालाई समेत समयवाधि बाँकी हुँदै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवंम् राष्ट्रियसभा सदस्य बद्री पाण्डेले राष्ट्रिय सभामा शून्य समयमा बोल्दै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.कुलप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको आदेशमा अपमानपूर्वक विमानस्थलबाट फर्काईएको बारेमा सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् । उनले उपकुलपतिलाई
सरकार स्वच्छेचारी बन्दै गरेको कांग्रेसको ठहर
काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ । सरकारले बहुमतको दम्भमा देउवा सरकारले गरेका निर्णय खारेज गर्नु बदनियतपूर्ण निर्णय भएको आरोप लगाएको छ । बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर कांग्रेसले
देउवा सरकारका राजनीतिक नियुक्ती बदर गरेर द्वन्द्व वढाउन खोजियोःकांग्रेस
काठमाडौं । सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरवहादर देउवाले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसले त्यसको विरोध गरेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ भदौ १४ गतेपछि गरेका सबै निर्णय बदर गर्ने निर्णय केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेपछि कांग्रेसले सरकार राजनीति द्वन्द्व
नेकपा वैठक प्रधानमन्त्री निवासमा बस्ने, चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे छलफल हुने
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने भएको छ । अपरान्ह ३ बजेका लागि बोलाईएको बैठकमा सरकार तथा संसदमा पार्टीको आगामी भूमिकाबारे छलफल हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ जानकारी दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणबारे संसदलाई औपाचारिक जानकारी गराएका छन् । असार ६ देखि १० सम्म चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण सफल भएको भन्दै त्यसप्रति आफू सन्तुष्ट रहेको बताए । मंगलबार संसदको वैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणअघि संसदमा
यस्तो छ कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको २१ बूँदे घोषणापत्र
हेटौंडा । प्रदेश नं ३ को राजधानी हेटौंडामा जारी नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापति भेलाले २१ बूँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । तीनदिन चलेको भेलामा सबै जिल्ला सभापतिहरूले चुनावी हारको विषय र अबका दिनमा कांग्रेसको भूमिका माथि केन्द्रित भएर आफ्ना धारणा राखेका थिए । भेलाले सात दशक भन्दा लामो बलिदानीपूर्ण
चिनियाँ राष्ट्रपति सी'ले भने- उपयुक्त समयमा नेपाल अाउँछु
बेइजिङ । गणतन्त्र चीनकाे भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई नेपाल भ्रमणकाे निम्ताे दिएका छन् । सीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरी प्नधानमन्त्री अाेलीले नेपाल भ्रमणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाएकाे निम्ताे दिए । बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ पिपलमा
काठमाडौं– चीन भ्रमणका रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दैछन्। चीनको ग्रेट हल अफ द पिपलमा राष्ट्रपति सीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली दूतावासमा चीनमा बस्दै आएका नेपाली समुदाय तथा नेपाल–चीन
कांग्रेस जिल्लासभापतिको भेला हेटौंडामा
हेटौंडा । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको चौथो राष्ट्रिय भेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार हेटौंडामा उद्घाटन गरेका छन् । तीन दिन चल्ने भेला हेटौंडाको पल्पसा क्याफेमा सुरु भएको हो। पहिलो दिनको उद्घाटन सत्रमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका सीमित नेताले सम्बोधन
कांग्रेस नेता सुदर्शन आचार्यको मष्तिष्कघातबाट मृत्यु
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस महासमिति सदस्य काठमाडौं क्षेत्र नं ७ गोलढुङ्गाका नेता सुदर्शन आचार्यको सोमबार निधन भएको छ। जेठ २५ गते मस्तिष्कघात भई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत आचार्यको सोमबार साँझ निधन भएको हो । उनी काठमाडौं ७ को साविकको गोलढुङगा गाविसका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् । स्थानीय सुशासन